‘अब थरुहट आन्दोलन उठ्दैन’
अन्तर्वार्ता/विचारशनिवार, आषाढ १०, २०७४
टीकापुर घटनाका अभियुक्त एवं पूर्व केन्द्रीय सदस्य, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम
थरुहट आन्दोलन किन सेलायो ?
टीकापुर घटनापछि राज्यले थारु नेता र अगुवाहरूलाई छानीछानी झूटा मुद्दा लगायो । त्रासले सामान्य थारु नागरिक बोल्नै नसक्ने भए । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई राज्यले कतिसम्म दमन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो, टीकापुर घटना ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको टीकापुर हिंसाको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
त्यतिबेला देशभरि नै सरकारी कार्यालयमा प्रदेशको नाम लेख्ने होडबाजी चलिरहेको थियो । त्यस्तैमा थरुहट आन्दोलनकारीले पनि टीकापुर नगरपालिका कार्यालयमा ‘थरुहट स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने कार्यक्रम थियो । धरपकड भयो । दुर्भाग्य, दुःखद घटना भयो । हाम्रो बुझाइमा त्यो थरुहट आन्दोलनलाई तुहाउन गरिएको षडयन्त्र थियो । कतिसम्म षडयन्त्र भने डेढ वर्षीय बालकको गोली हानेर हत्या गरियो । आठ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो, उनीहरू कसैलाई गोली लागेको छैन । घरेलु हतियारकै घाउ छन् । तर, बालकलाई कसरी गोली लाग्यो ? खै निष्पक्ष छानबीन ?
घटनामा तपाईंको भूमिका चाहिं के थियो ?
मेरो कुनै संलग्नता छैन । म काठमाडौंमा थिएँ । मैले कुनै निर्देशन पनि दिएको छैन । प्रहरीले मेरो मोबाइल, इमेल, फेसबूक सबै चलाइरहेको छ, केही भेटिएको छैन । अर्को कुरा, म त्यतिबेला आन्दोलन समितिमा पनि थिइनँ । यसले आन्दोलन गर्छ भनेर झूटा मुद्दा लगाएको हो । अदालतबाट निर्दोष सावित हुनेमा म विश्वस्त छु ।
अब थरुहट आन्दोलनको भविष्य के देख्नुहुन्छ ?
थरुहट आन्दोलन अब उठ्दैन । यो दुई वर्षको अवधिमा कहीं कतै थरुहट शब्द समेत सुनिएन । राज्यले दमन गर्‍यो, मधेशवादी दलहरूले धोका दिए । भन्ने नै हो भने अब थरुहट स्वायत्त प्रदेशका लागि आन्दोलनको आवश्यकता पनि छैन । किनकि नेपालमा संघीयता असफल भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संसद्को निर्वाचन हुन्छ, प्रदेशको हुँदैन, दलहरूले नै गर्दैनन् । त्यसैले पनि अब प्रदेशका लागि आन्दोलनको आवश्यकता छैन ।
थुनामुक्त भएपछि के गर्नुहुन्छ ?
थारुहरूलाई कसले मान्छे गन्छ र ! हामी दास हौं । पहिले पनि र अहिले पनि । थारुलाई कमैया र कम्लहरी राखिएको छ । राज्यले पनि त्यही गरिरहेको छ । अबको मेरो आन्दोलन थारु समुदायको समानता, न्यायिक अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि हुन्छ ।
थरुहट आन्दोलनमा सक्रिय नेता/कार्यकर्ता स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका छन्, कसरी हेर्नुभएको छ ?
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले चुनाव विरुद्ध जाने भन्ने छैन । साथीभाइलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनुस्, जति सक्नुहुन्छ, जित्नुस् भनेको छु । भेट्न आउनेहरूलाई निर्वाचनलाई अवसरका रुपमा लिनुस् भन्ने सल्लाह दिइरहेको छु ।